उनले बैठक स्थगित हुनुमा कोरोना बहाना मात्र भएको भन्दै असन्तुष्टि पनि जनाइन् । बैठक स्थगित भएकोमा के भन्छिन् त नेतृ शाक्य ? प्रस्तुत छ शाक्यसँगको कुराकानी जस्ताको तस्तै :
–दिक्क त लाग्छ तर दिक्क मान्नु पनि भएन नि । योे पार्टी कसरी चलिरहेको छ भन्ने कुरा छ्याङ्गै भयो । प्रस्टै भयो । पार्टी कसरी चलिरहेको छ ? नेतृत्व कस्तो छ भन्ने कुरा यो घटनाले पनि देखायो । नत्र यत्रो कोरोनादेखि लिपुलेक र नीति तथा कार्यक्रमसम्मका समस्या छन्, छलफल गर्नुछ । तर हालत यस्तो छ । स्थायी कमिटी भनेको त महत्त्वपुर्ण कमिटी हो । यस्तो महत्त्वपूर्ण बैठक बस्ने कुरामा यस्तो पारा छ । केटाकेटी पारा भनौँ कि के भन्नु ? हचुवा भन्दा पनि होला । बहाना बनाएर र टारेरै हुन्छ भन्ने देखियो । बहाना नै बनाउने हो भने त जहिले पनि एउटा एउटा बहाना त निस्किहाल्छ नि । तर अब अहिले कोरोना बहाना बनिदियो । रातोपाटी
भक्तपुर रेडक्रसद्वारा हाइजिन किट वितरण
रौतहटमा दम्पतिमाथि आक्रमण : श्रीमतीको मृत्यु
नेपाली सेनाका जवानको मृत्यु